China Power Station USB Manufacturer - Ogo Power Station USB kwuru - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > USB > Eriri ọdụ ọdụ ike
1. A na-eji igwe eletrik pụrụ iche eme ihe maka njikọ nke mgbaàmà mgbaàmà mgbaàmà nke ọnọdụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ọkụ eletrik.
2. Mgbochi mmanụ, nrụgide dị elu na nguzogide corrosion. Ọ nwere ezigbo ihe eji arụ ọrụ, nwere ike iguzogide mmetụta dị elu na ike ọkụ; Nnọọ ike ọdụdọ, nwere ike ịnagide ekwe ogologo oge ekwe. Nnukwu mkpuchi ọta na-eguzogide nnyonye anya nke magnetik na mpaghara eletriki dị na mgbaàmà. Onye na-eduzi ọla ọcha nke ọla kọpa na-egbochi onye na-eduzi ihe na-egbu egbu na gburugburu ebe obibi dị elu ogologo oge ma na-emekwa ka arụmọrụ nke onye na-eduzi ya dịkwuo mma. Multi-isi waya, ndị resistivity nke ọ bụla twocores bụ nnọọ ezi, ihe dị iche nke ndị na-eguzogide bụ ihe na-erughị 0.05Ω/ 100m.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Eriri ọdụ ọdụ ike na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Eriri ọdụ ọdụ ike dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.